संघीय संरचना अनुसार १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव : कहाँ तोकिँदै प्रदेशका राजधानी ? - आयो खबर
संघीय संरचना अनुसार १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव : कहाँ तोकिँदै प्रदेशका राजधानी ?
२०७४ आश्विन २३ प्रकाशित १५:२६
असोज २३, काठमाडौँ । संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्यामान ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । मुलुकलाई संघीय संरचनामा विद्यमान मन्त्रालयलाई समायोजन गर्दा १५ वटा मन्त्रालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवक्ता शिवहरि न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रकाशित | २०७४ आश्विन २३ प्रकाशित १५:२६
निर्मला हत्या प्रकरणमा २६ प्रहरीमाथि अनुसन्धान जारी
प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तमा भक्तपुरमा दुई अपहरणकारी मारिए
दार्चुलामा बाढी पहिरो, पुरिए आधा दर्जन घर